Taalibaanka ayaa weeraray Saldhig Milatari e garoonka Dayuuradaha Kandahar – Radio Muqdisho
Taalibaanka ayaa weeraray Saldhig Milatari e garoonka Dayuuradaha Kandahar
Ugu yaraan 22 askari oo ka tirsan ciidamada dowlada Afghanistan iyo 9 kamid ah Talibanka ayaa ku dhintay dagaal culus oo xalay saqdii dhexe ka dhacay Saldhiga Militari ee ku yaal Madaarka magaalada Kandahar ee koonfurta dalka Afghanistaan.
Xoogaga Talibanka oo ku labisnaa dareeska ciidamada ayaa gudaha u galay saldhigaasi oo ay ku sugan yihiin ciidamada dowlada, militariga Maraykanka iyo NATO.
Dagaalka ayaa muddo dheer socday kadib markii dagaalyahanada Talibanka ay afduubteen qaar kamid ah ehelada iyo qoysaska askarta Afghanistaan oo ku noolaa guryo ku dhaw saldhiga.
Weerarkan ayaa ah kii 2aad oo muddo 24saac gudaheed ah kooxda Talibanka ku qaadeyso magaalada Kandahar, waxayna kooxdaasi Salaasadii shalay sidoo kale weerareen saldhiga Booliiska ee magaaladaasi.
Dagaalkan ayaa kusoo beegmaya xili uu maanta oo Arbaco ah magaalada Islamabad ee dalka Pakistan ka furmay shirweynaha dalalka Aasiya oo looga hadlayo xaalada dalka Afghanistan, waxaa weli socda dadaal lagu doonayo in dib loogu soo nooleenayo wadahadalkii uu dhaxeeyey Dowlada Afghan iyo Talibanka.
Cabdul xamiid Abaa Cuud oo la sheegay in uu ka danbeeyey Weerarkii Paris.